Cyclicity ukuthuthukiswa komnotho
Umnotho neze isebujameni lokuphumula. Ekuchumeni indawo nesimo esibucayi noma ukwethuka. Falling ingeniso kazwelonke, ukuqashwa kanye ukukhiqizwa. Abasebenzi emgwaqeni, inzuzo kwehle kakhulu. Lapho yonke le nqubo, ekugcineni sifinyelela sikhathi yokutakula iqala. Isibuyekezo kungaba kokubili kancane futhi okusheshayo, kanye akuphelele futhi ephelele. Kwase kuzoqala igagasi entsha yokuchuma kufaka ezingeni okusimeme funa sisemanzini, inani elikhulu imisebenzi etholakalayo, amanani ephakeme nezindinganiso ophilayo. Noma, Ngakolunye uhlangothi, kungase kube nokukhuphuka kwamanani ezimpahla okusheshayo, ukukhula kokuqagela ukuvela nenhlekelele omusha.
Lena isithombe jikelele esimele ukuthuthukiswa kwezomnotho cyclical. Kuyinto ejwayelekile umnotho yemboni kazwelonke emazweni asethuthukile zomhlaba esikhathini esidlule engamashumi ayisikhombisa.
Izimbangela ukuthuthukiswa cyclical komnotho kufanele itholwe ikakhulukazi ukwedlulela umphakathi maqondana umnotfo bezinga emnotfweni imali, ephelezelwa ubuhlobo obuseduze ngamaketanga yayo.
Ngamunye round okwalandela yentuthuko akuyona ikhophi esiqondile kulowo odlule. Nokho, ayefana kakhulu njengoba efana nomunye omkhaya owodwa. Cyclicity ukuthuthukiswa komnotho ayikwazi ngokugcwele unikezwe izibalo kanye amanye amafomula. elisebenza ngayo kushesha kangaka futhi ongenakulinganisela abafana izinguquko sezulu noma amagagasi eziwumshayabhuqe.
Konke okungenhla kusikisela ukuthi ukuthuthukiswa cyclical emnothweni - lena eyodwa nje eceleni nkinga ekufezeni nokugcina ezingeni lelisetulu umsebenzi futhi ukukhiqiza, ethuthuka kancane kancane komnotho.
Esikhathini esidlule, lapho akwanele idatha izibalo, lapho ucabangela le nkinga, unganaki kakhulu sakhokhwa izinkinga, panics, bankruptcies. Kamuva, ukuxoxa ubunjalo cyclical sokuthuthuka komnotho, useluleme izigaba ezimbili: ukuchuma nokucindezeleka. Kungenjalo, ecacisa ukuthi boom kanye esibucayi kufanele vertices futhi iphuzu umthelela, okuyinto senguquko phakathi wathi izigaba. Manje-ke ngokuvamile baqaphela ukuthi zonke inkathi ekuthuthukiseni umsebenzi kwezomnotho lisikisela esigcwele abantu emsebenzini. Ngokwesibonelo, ngemva crisis ezithile e Melika eminyakeni engu-30-yalolucwaningo kwekhulu lama-20 e eminyakeni embalwa ezayo lapho iye ubuyekeza bese uphonsa ukuba sezingeni leliphasi, okungukuthi, ayikwazi kubhekwa isikhathi sokuchuma. Ngakho-ke usosayensi Welsy K. Mitchell, ukuhlaziya umcimbi, hlukanisa ukuthuthukiswa kwezomnotho cyclical ngezigaba ezine. Into ebaluleke kakhulu izinkathi kwanda nokuncipha kuphindwe. Isigaba sokuqala (ukunwetshwa), ukufinyelela phezulu ludlulele ngaphakathi esigabeni kokucindezelwa. Ngendlela efanayo esigabeni kokucindezelwa isifike phansi ekuvuseleleni futhi futhi ingena esigabeni ukunwetshwa. Okungukuthi, zonke izigaba ezine lihamba njalo komunye nomunye. Kuvele ezabe zezomnotho yesimanje iwukucabangela akukho izinkathi ukuvelela ukwehla, okungukuthi ukuthuthukiswa komnotho Dynamics. umjikelezo Economic, uma ikhalenda lonyaka sehlukaniswe ezine zonyaka. amaphuzu Ukuvula ahlukaniswe izinkathi kwanda nokuncipha kuphindwe. Futhi hhayi vertex ngamunye liyanda ngokuya abangasebenzi ongaphakeme. Noma aphansi iphuzu ngalinye kunesikhungo esiyinkimbinkimbi crisis.
isigaba ngasinye libhekene nezimo zabo zezomnotho lidinga indlela ekhethekile. Isikhathi umjikelezo kwezomnotho incike onjani imijikelezo is kucutshungulwe. Abanye abacwaningi, ucabangela inqubo kusuka iphuzu zomlando umbono, ukhuluma yamaza eside kakhulu. umjikelezo yabo egcwele ihlanganisa iminyaka engaba ngu-amahlanu. Kodwa akubona bonke zezomnotho bebona kudingekile ukwaba imijikelezo emifushane (lapho kwakukhona kuphela ukuntengantenga ababuthakathaka), lenye esisodwa esikhulu.
Frik Vilgelm: Biography, nokuhileleka kwezombusazwe
Umugqa ebomvu "uLizwi": indlela ukusebenza na?
Amaphilisi Clotrimazole - sifinyeto umkhiqizo